के हो वीर्यपातको समस्या ? – सुनाखरी न्युज
के हो वीर्यपातको समस्या ?
Posted on: November 10, 2020 - 7:21 am
अनिच्छित रूपमा वीर्य निस्कने क्रिया वीर्यपात हो । जो आमरूपमा निद्राको समयमा या पिसाब या मल त्यागको समयमा हुने गर्छ । यो कतिपय पुरुषमा हुने एक किसिमको यौन समस्या हो । जसमा अनिच्छित रुपमा वीर्यपात हुने गर्छ । जुन आमरूपमा यौन उत्तेजना र सम्भोगविना नै हुनेगर्छ ।
अभ्यासमार्फत् पनि वीर्यपातको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर कुन् मांसपेशीलाई अभ्यासमा ध्यान दिने रु भन्ने कुरा जानकारी राख्नुपर्छ । यसको लागि किगल एक्सरसाइज गर्न सहज हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो पिसाब गर्ने समयमा आफ्नो मांशपेशीहरूको अवस्थाको बारेमा पत्ता लगाउने सबैभन्दा सजिलो तरिकामध्येको एक हो । जुन यस्तो प्रकारको हुन्छ ।